Waa maxay sababta ay lagama maarmaanka u tahay caymiska guriga? | Wararka Safarka
Waa maxay sababta ay lagama maarmaanka u tahay caymiska guriga?
Nacho Cuesta | 10/09/2021 15:18 | Talooyin
Xagaagu wuxuu durba bixinayaa jugtii u dambaysay. Si kastaba ha ahaatee, jawiga wanaagsan ayaa u muuqda mid u yimid inuu sii joogo waxaana jira dad badan oo ka faa'iideysta nasiinada daqiiqadaha ugu dambeeya si ay xagaaga u xiraan qaab ahaan ilaa sannadka dambe. Maxay yihiin qorshayaasha ugu fiican ee lagu dhamayn karo xagaaga?
Mid ka mid ah qorshayaasha ugu fiican waa mootooyinka. Waxaa sii kordhaya dadka lagu dhiirrigelinayo inay ku safraan baabuur noocaan ah. Mana aha wax ka yar maxaa yeelay faa'iidooyinka ay bixiso waa badan yihiin:
Suurtagalnimada in lagu safro meelo badan waqti yar gudaheed
Dabacsanaanta ah in aan lagu xidhin wakhtiga gelitaanka ama ka bixitaanka
Ha ka baqin cimilada sidoo kale, maxaa yeelay iyadoon loo eegin waxay sameyneyso si ka fiican ama ka xun, baabuurtani waxay ku dhex leeyihiin nidaam kululeeye. Hadda oo leh COVID waxay noqdeen kuwo aad moodo, laakiin haa, markaad la safraysid waa qasab inaad haysato a caymiska guriga.
1 Sababaha loo haysto caymiska guriga
2 Caymis noocee ah ayuu caymiska guryuhu inta badan leeyahay?
Sababaha loo haysto caymiska guriga
Kaamamka badhtamaha dabeecadda ayaa leh, laakiin waxaa kale oo jiri kara duruufo is -daba -joog ah oo annaga iyo kuwa kaleba ah, haddii ay dhacdo oo aan caymis u haysanno gurigayaga, waxaan joojin karnaa welwelka xad -dhaafka ah.
Waxaad ku guuleysataa xasilloonida Haddii aad haysato wiish ku caawiya haddii ay wax dhacaan, adiga keligaa ama saamaynta dabeecadda lafteeda sida dabka, dabaylaha sifooyinka waaweyn ama laamaha soo dhacaya, iyo kuwo kale
Waxaad iska ilaalisaa bixinta xaddi dhaqaale oo xad dhaaf ah haddii ay dhacdo burbur, xatooyo, dharbaaxo lala beegsado baabuurta kale ama tas -hiilaadka iyo xitaa jugta dhinac saddexaad
Caymis noocee ah ayuu caymiska guryuhu inta badan leeyahay?
Guud ahaan, badi caymisyada mootada badanaa waxay bixiyaan kuwa soo socda caymiska ugu badan:
Mas'uuliyadda madaniga ah
Dadka waayeelka ah way awoodaan waxaa ka mid ah noocyada kale ee daboolidda ee ilaalin weyn sida tuuganimada, daaqadaha jajaban ama kuwa cadceeda ku shaqeeya, iyo kuwo kale.
Mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan waa maraakiibta xerada, kuwaas oo xajmiga lammaaneyaasha ku habboon oo caadi ahaan la safra dhowr maalmood si aad u wanaagsan. Xaaladaha noocan oo kale ah, waxaa ugu wanaagsan in la helo a caymiska kirada ee guryo maalmeed. Laakiin, ma tahay dhaqaale in la qaato caymiska noocan ah?
Tan awgeed, waxaa lagu lafa guray inta qiimuhu kala duwan yahay marka la kiraysanayo caymiska guryaha labada dhinacba iyo dhammaan khataraha 7, 15 iyo 30 maalmood.
Nooca caymiska 7 maalmood 15 maalmood 30 maalmood
Xisbiyada Saddexaad 35 - 54 € 60 - 130 € 126 - 195 €
Khatar kasta 84 - 95 € 179 - 198 € 292 - 332 €
Xigasho: waxaa diyaariyey Roams ilaa Terránea.
Caymiska dhinac saddexaad dhexdiisa, qiimuhu wuu ka qaalisan yahay ama ka jaban yahay iyadoo ku xiran hadday ku jirto kaalmada baabuurka iyo in kale, siday u kala horreeyaan. Marka laga hadlayo caymis dhammaystiran, xaddiga ayaa sidoo kale la beddelaa iyada oo ku xidhan xad -dhaafka caymiska. Sidaa darteed, haddii ay tahay caymis dhammaystiran oo leh € 200 oo xad -dhaaf ah, qiimaha caymiska ayaa ka sarreeya kan caymiska leh excess 300 oo xad -dhaaf ah.
Ugu dambayntii waxaa la arkay inaysan jirin kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya caymis 7 ama 15 maalmood ah. Sida caadiga ah, shaqaaleynta a caymiska guryo -guri bil kasta wuxuu ahaan doonaa mid jaban xagga dhaqaalaha ee xisaabinta kharashka maalintii Ka warran haddii aad samayso toddobaad ama laba toddobaad. Sidaa darteed, way ka jaban doontaa maalmo badan oo aad shaqaaleysiiso.
Iyo tan ugu fiican oo dhan, waxaad leedahay suurtagalnimada in caymisku wuxuu dabooli doonaa diyaarinta lacag la'aan haddii ay dhacdo in wax kugu dhacaan adiga iyo saaxiibbadaada iyo sidoo kale guriga mootada aad ku safraysid. Sidaa darteed, bogsashada caafimaadku waa ikhtiyaarka ugu fiican ee wanaagga dhammaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin » Waa maxay sababta ay lagama maarmaanka u tahay caymiska guriga?
Maxaa lagu arkaa Picos de Europa